Volkswagen ID Crozz: SUV eletriki | TeraNews.net
Volkswagen ID Crozz: SUV eletriki
na-ede akwụkwọ pakholenko E bipụtara 30.07.2019
Volkswagen ID Crozz SUV, nke ekwuputara na 2017, dabara na oghere nke igwefoto amateur. Nnwale ụgbọ ala n'okporo ụzọ nke mba Europe dịcha mma. N ’ihu, SUV na-eleghari anya dika ihe nlere anya, mana mgbanwe a na-atụ anya na echiche Volkswagen bụ ihe a na-ahụ nke ọma na usoro ahụ. Dabere na onye nrụpụta ahụ, a na-atụ anya mgbanwe abụọ nke ụgbọ ala ahụ n'usoro ọgbakọ: a Coupe na SUV classic.
Mwepụta nke usoro mmepụta SUV ka akwadoro na Europe, USA na China. Yabụ, anyị nwere ike ịsị na nchekwa ọhụụ ga - apụta n'otu oge na kọntinenti niile. A na-ahazi ahia maka mmalite nke afọ 2020. N'oge a, osisi atọ kwesịrị ịnakọta ụgbọ ala 100 puku.
Kslọ ọrụ Volkswagen na-ezube iwepụta ụgbọ ala eletriki, mana anaghị ahapụ gọọmentị maka iji mmanụ gas eji eme ihe. Nke a na-eme uche, ebe ọ bụ na ụgbọala ndị nọ n'okporo ụzọ nwere moto eletriki ele anya N’ahịrị nke SUVs, ihe ọhụrụ ahụ bụ nke Volkswagen Tiguan.
Volkswagen ID Crozz dabere na MEB nwere ọkụ eletrik abụọ. Mbanye ọ bụla nwere axle nke ya (ihu na azụ). Igwe dị n’ihu na-ewepụta ịnyịnya ibu 101, ebe igwe azụ na-ewepụta horsepower 201. Na mkpokọta - 302 hp Ike idobere nke ihe ọhụụ ga-adị n'ime kilomita 311. Volkswagen ekwuola na ọ chọrọ ịkwụsị ọsọ ọsọ nke ID Crozz SUV na 112 kilomita kwa elekere.
Ihe Tesla Model S Plaid nwere na PlayStation 5
Huawei HiCar Smart Screen maka $ 260
Bugatti Royale - adịchaghị acoustics
Safety afụ - ihe ọ bụ
Apple Project Titan - ewerela nzọụkwụ mbụ
XIAOMI Mi Power Bank 2 (5000mAh): nyochaa
Kedu mgbe ngosi nke iPhone ọhụrụ 12 na 2020?
Netwọsị Netinetị kacha mma emere
Nkwado US megide Xiaomi